नेपाली चलचित्र क्षेत्रले राम्रा संभावनाहरु बोकेको छ : कथाकार शिवम अधिकारी – Namaste Filmy
नेपाली चलचित्र क्षेत्रले राम्रा संभावनाहरु बोकेको छ : कथाकार शिवम अधिकारी
[dropcap]नि[/dropcap]क्कै ब्यस्त रहँदै आइरहनु भएका नेपाली चलचित्रका “स्क्रीप्ट टाइटर” हरु मध्येका एक हुन “शिवंम अधिकारी” । उहाँले नेपाली, भोजपुरी लगायतका र साना–ठूला करीब एक सयको हाराहारीमा कथाका साथसाथै पटकथा र संवाद समेत लेख्न भ्याइसक्नु भएको छ । निर्देशन कार्य समेतमा दख्खल राख्नु हुने उहाँ केहि वर्ष यतथा देखि“निरर्थक” कथा वस्तुहरुमा चलचित्र निमार्ण हुन थालेकोमा ज्यादै चिन्तीत हुनु हुन्छ । नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारका लागि स्पष्ट सरकारी निति नहुन देखि सरोकारवालाहरुको उदासिनतालाई समेत दोषी देख्नु हुन्छ कथाकार अधिकारी । तर नेपाली चलचित्रको उज्वल भविष्यको दृष्यहरु पनि देखिरहेको बताउनु हुन्छ उहाँ । नेपाली चलचित्र प्रति अत्यन्त लगाव राख्नु हुने तिनै ब्यस्त कथाकार अधिकारीसँग नमस्ते फिल्मीका सहकर्मी राजेन्द्र कार्कीले गर्नभएको कुराकानी:
प्रश्न :हिजो आज कतिको ब्यस्त हुनु हुन्छ साथै लेखन कार्यबाट यहाँले कति सम्म सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहनु भएको छ ?
उत्तर : ब्यस्तै छु भन्नु प¥यो । कामहरु आइनै रहेको हुन्छ । फुर्सद मै छु भन्न त मिलेन नी । आफ्नो कामबाट त म निकै नै सन्तुष्ट रहँदै आइरहेको छु ।
प्रश्न : कस्तो खालको कथाहरु लेख्नमा लागि रहनु भएको छ नी ?
उत्तर : म यस क्षेत्रको आफुलाई पूर्ण ब्यावसायी लेखक हुँ भन्ने ठानेको छु । जस्तो किसिमको माग हुन्छ, त्यस्तै लेख्नु पर्ने हुन्छ । म एउटा ब्यावसाय गर्ने ब्यक्ति भएको कारणले मेरो पसलमा कोही क्रेता चाउचाउ माग्न आउँछन भने उहाँलाई मैले विस्कुट भिडाएर पठाउने कुरा त आउँदैन । छोटकरीमा भन्नु पर्दा मैले ब्यावसायीक मर्यादालाई पालना गरेर सृजनाहरु गर्दै आइरहेको छु ।
प्रश्न : दई चारवटा हिन्दी चलचित्र वा कथाहरुलाई मर्च गरेर नेपाली चलचित्रहरुको कथा÷पटकथा÷संवाद लेख्न त सजिलै होला नी हैन र ?
उत्तर : हाहाहा…….. । हो वास्तवमा हाम्रा अधिकांश लेखकहरुले त्यस्तै गर्दछन भन्ने सुन्नमा आइरहन्छ । यो अलि सस्तो र हचुवामा गरिने काम भयो । म बाट त्यती सम्मको काम चाहीँ कसैले गराउन सकेका छैनन । तर जस्तो दाम दिन्छन त्यस्तै काम गर्ने हो । जस्तो भन्यो त्यस्तै बन्छ । म आफुले पनि नचाहँदा नचाहँदै पनि केहि निर्माताहरुको दवाबमा बाध्य भएर केहि चलचित्रहरुका लागि यस्तै किसिमले कथाहरु लेख्नु परेको तितो यर्थाथ पनि नभएको होइन । भन्ने नै हो भने यो हाम्रो ब्यावसायीक मर्यादा पनि हो । तर म त दुर्भाग्य नै भन्छु, यसैको चल्ते नेपाली चलचित्रहरु बेलगामे घोडा जस्तो कुदीरहेका छन् ।
प्रश्न : प्रारम्भ र अहिलेमा कथा लेखनमा के –कस्तो अन्तर र प्रवृतिहरु पाइरहनु भएको छ ?
उत्तर : हेर्नुस, एका तर्फ चलचित्र ब्यावसायलाइ नै ट्रयाक्क मा ल्याउन सरकारसँग कुनै ूस्पष्ट निति नै छैन । चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भनेर गठन गरिएको “चलचित्र विकास बोर्ड” बिनास बोर्डको रुपमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । अर्को तर्फ रहर र लहडमा अन्धोँ भएर पैसा कमाउने उद्देश्य लिएर निर्माताहरु आइरहेका छन् । यस्तो खतरनाक दुइ धारको बिचमा बसेर स्वच्छ लेखकको रुपमा स्थापित हुनु भनेको साह्रै नै गाह्रो काम हो । केहि वर्ष यता देखि उही घिसिर पिटिर र निरर्थक कथावस्तुहरुमा नेपाली चलचित्रको निर्माण भइरहेको छ । यस्ता कथा वस्तुको आधारमा निर्माण हुने गरेका चलचित्रका कारण सार्थक कथावस्तुहरुमा निर्माण भएका चलचित्रहरुलाई समेत दर्शकहरुले त्यहि दर्जामा राखेर अनुमान गर्न थालेका छन् । यसले पक्कै पनि हाम्रा कर्णधार कीशोर–किशोरीहरुलाई सकारात्मक सन्देस दिएको छैन । नेपाली चलचित्रका पारखीहरुलाई समेत निरुत्साहित बनाउनेखालका कथावस्तु संवादहरु हावी भइरहेको छ । यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि मात्र नभएर सम्पुर्ण नेपाली कलासंस्कृति कै अवमूल्यंन हो । यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । होइन भने हामी पनि केहि वर्ष पछि मलेशिया र सिंगापुर जस्तो अन्य देशको चलचित्र आयात गरेर मनोरञ्जन लिनु पर्ने हुन्छ ।
प्रश्न :यस्ता खाले गलत प्रवृतिहरुलाई निरुत्साहित गर्नका लागि केहि उपायहरु त होलान नि ?
उत्तर : उपाए अवश्य छ । खास गरी मिडिया कर्मीहरुले उच्छसृङ्खल र छाडा प्रवृतिका चलचित्रहरुका लागि प्रचार प्रसार जस्ता क्रियाकलापहरुमा सहयोग नपु¥याउने तर्फ लाग्नु पर्दछ । चलचित्रका साथै हलहरुको समेत स्तर निर्धारण गरिदिने र सोही अनुसारको प्रर्दशन ब्यवस्था मिलाइदिने हो भने अवश्य पनि क्षणिक आम्दानीको प्रलोभनमा पर्ने निर्माताहरु समेत निरुत्साहित हुने छन् । अनि पुनः मौलिक धारका चलचित्रहरु निर्माण हुने छन् । यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अवश्य पनि सवल बनाउँदै लैजाने छ ।
प्रश्न : यस्तो अभियानमा तपाईको ब्यक्तिगत प्रयास चाहि के रहँदै आइरहेको छ त ?
उत्तर : मैले अनेकन समय यसै क्षेत्रमा बिताइसकेको छु । मैले अब आइन्दा पनि गर्न सक्ने र गर्ने काम भनेको यहि नै हो । मलाई त यस क्षेत्र प्रति अगाथ माया छ । चलचित्र क्षेत्रमा बढ्दो दुरगती प्रति आक्रोश पनि छ । तर मेरो ब्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र के हुन्छ र ? तर यसमा म आफु भने गम्भिर नै रहँदै आइरहेको छु । जसका कारण पनि म रहर र लहडमा प्रवेश गर्ने निर्माताहरुलाई साथ दिइरहेको छैन । यसबाट पनि मैले एक प्रकारको सर्मपण नै गरेको छु । तर सरोकारवालाहरु सबै नै शुद्धिकरणका लागि लाग्नु प¥यो नी । यसमा सबेको एक मत भई अगाडि बढ्न पनि जरुरी भइसकेको छ ।
प्रश्न : यस्तो बिषम परिस्थीतीको बिचमा भबिष्यमा नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारका संभावनाहरु के–कस्तो देखिरहनु भइरहेको छ ?
उत्तर : यस विषयमा त म आशावादी नै छु । हेर्नुस केहि वर्ष अघि सम्म नेपालीले नचिनेको न जानेको खेल क्रीकेट आज नेपाली क्रीकेट टिम विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल भएको छ । विश्वले कुन नेपाली खेलाडी कसरी खेल्छ, उसको राम्रो नराम्रो पक्षहरु के के हुन भन्ने जस्ता क्रियाकलापहरु अध्ययन गर्ने विषय बन्न सकेको छ । त्यस्तै हाम्रो चलचित्र क्षेत्रलाई पनि निश्चित नियम कानुनको दायरा र प्रणालीमा ल्याएर गलत प्रवृतिहरुलाई निरुत्साहित गर्दै जाने हो भने अवश्य पनि चाडै नै नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि क्रीकेट जस्तै विश्व जनमानसको अध्ययनको केन्द्र बन्न सक्ने छ । साथसाथै अनुशासित र मर्यादित भएर इमान्दार पूर्वक लागि परिरहे केहि वर्ष भित्रैमा नेपाली चलचित्रहरु समेत ओस्कार एवार्डका बिजेता बन्न सक्ने छन भन्ने सम्मका संभावनाहरु म देखि रहेको छु । सबै निष्पक्ष र सक्रिय भइ लागि परे अवश्य पनि त्यो दिन देख्न पाइन्छ भन्नेमा समेत म आफु ढुक्क छु । धन्यवाद ।
‘हिम्मतवाली’को टिम 'कुर्वान'मा गीत रेकर्डिङ सकियो
'धूम' मच्चाउने पालो अब सलमान खानको ।